Fonosana 1.1 inona no vaovao aorian'ny fandanianao fotoana? | Avy amin'ny Linux
Fonosana 1.1 inona no vaovao aorian'ny fandanianao fotoana?
Tadidinao ve fononteny mahitsy? Ao amin'ny FromLinux manokana lahatsoratra maromaro izahay ho an'ity mpampanonta lahatsoratra ity loharano misokatra natolotry ny Adobe sy ny Community, ary nanomboka teo dia nivoatra tsikelikely hatramin'ny fahatongavana amin'ny kinova 1.1 miaraka amin'ny fanatsarana sy endrika maro. Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny sasany amin'izy ireo, saingy aleo aloha tadidintsika ny sasany amin'ireo safidy mety fononteny mahitsy zavatra hafa.
1 Fanovana an-tserasera amin'ny fonosana
2 Hizaha singa, loko ary sary amin'ny fononteny
3 Fijery misaraka ao amin'ny fononteny
4 Fanitarana, fanitarana maro ao amin'ny fononteny
5 Fehin-kibo sy nalaina
6 Famaranana ny fononteny
Fanovana an-tserasera amin'ny fonosana
Iray amin'ireo fiasa mahaliana indrindra ao amin'ny fononteny izay antsoiko hoe "Fanovana an-tserasera", izay misy ny fanovana ireo fananana CSS misy tag HTML efa misy, na ny famoronana iray vaovao, avy amin'ilay fisie ihany. .html tsy mila manokatra ny fisie styleheet. Mila apetraka eo amin'ilay marika mifandraika aminy fotsiny ny tsivam-bokatra ary tsindrio Ctrl + E.
Hizaha singa, loko ary sary amin'ny fononteny
Ny fononteny dia ahafahantsika maka sary an-tsaina ireo sary izay ampifandraisinay amin'ny kaody html na ny lokon'ny trano iray ao amin'ny fisie .css araka ny hita amin'ny sary teo aloha. Ho fanampin'izay, manana safidy ianao hahita ny fanovana izay tahirizinay ao amin'ny rakitra html ao aminay Google Chrome mandeha ho azy, tsy mamerina ny pejy.
Ireo no sasany amin'ireo endrika nampangidihidy indrindra an'ny Fehin-tànana tamin'izany fotoana izany, fa misy kosa ireo vaovao ankehitriny.
Fijery misaraka ao amin'ny fononteny
Ankehitriny isika dia afaka miasa tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fisie roa miaraka amin'ny fizarana ny zotran-dahatsoratry ny zoro sy ny marindrano. Tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo lohahevitra amin'ny alàlan'ny default ary mamela antsika hisafidy ny endritsoratra ampiasainay sy ny habeny.
Fanitarana, fanitarana maro ao amin'ny fononteny
Raha misy zavatra izay nihatsara be ny fononteny (noho ny fiarahamonina) dia ao amin'ny lisitry ny fanitarana misy, maro amin'izy ireo no manana kalitao tena tsara.
Mampiasa zavatra tena mahaliana toy ny:
hahatsara tarehy: Mba hanatsarana ny kaody JS, CSS ary HTML
Bootstrap 3 Skeleton: Mamorona html vonona Boostrap.
Mampitaha ny fononteny: Fitaovana DIFF.
Lisitry ny tanjona: Manana lisitry ny lahasa etsy an-tanana
Fonosana Git: Iray amin'ireo ankafiziko indrindra, mamela ahy hitantana ny tetikasako sy ny toerana fitahirizany GIT izany. Mamela pikantsary amin'ity sary manaraka ity aho.
Ny hafa, maro hafa ..
Fehin-kibo sy nalaina
Miaraka amin'ny kinova 1.1 an'ny fononteny dia azontsika atao ny misintona karazana izay misy ny Extract, izay amin'ny ankapobeny incluye una nueva experiencia de instalación inicial y una característica que le permite colaborar con un diseñador (que use .PSD) y que utilice la nube de Adobe. Tsy azoko lazaina aminao marina ny fomba fiasa noho ny antony mazava, fa toa safidy mahafinaritra izany.
Famaranana ny fononteny
Raha fintinina dia azoko atao ny milaza fa ao anatin'ny fotoana fohy ilàny amin'ny fampandrosoana dia manana toerana manan-danja ho ahy eo amin'ny safidy hafa ananantsika eto ny fononteny. Tsy lavorary izy io, mbola lavitra ny lalan-kaleha (ary iriko raha toa ka mihazakazaka haingana toa ny Sublime Text), saingy noho ireo fiasa sy fanitarana vaovao izay nampiana, dia nanjary safidy tsara ho an'ny mpampiasa izany. Frontends.
Mety manana zavatra kely holazaina aho, fa ny zavatra tsara indrindra dia ny manandramanao azy ka mitsara ny tenanao. Misy ny fononteny ao amin'ny tranonkalany miaraka amin'ireo fonosana natambatra ho an'i Debian / Ubuntu, na ireo loharano niavian'izy ireo. Raha mpampiasa ArchLinux ianao dia azonao atao ny mametraka azy mivantana avy amin'ny AUR.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fonosana 1.1 inona no vaovao aorian'ny fandanianao fotoana?
Nampiasa braces aho nanomboka tamin'ny version 0.27 ary nitombo be aho tamin'izay fotoana izay 🙂
Vato io !! Titan!
Miandry ny fitsapana an'i Debian fotsiny aho 😀
Tanrax dia hoy izy:
Azo atao ve ny mihetsika amin'ny lalan-kely vi / vim?
Mamaly an'i Tanrax
Amin'izao fotoana izao ny tonian-dahatsoratra amboariko, satria hitako fa xD no soloiko mifidy
fiaraha-miasa15 dia hoy izy:
Tena tonian-dahatsoratra mahavariana izy io, nahasarika ahy hatramin'ny nanandramako azy voalohany. Manoro izany aho. Manantena aho fa hiala ao anatin'ny fotoana fohy dia hesoriko ilay hegemony avy amin'ny SublimeText.
Valiny amin'ny cooper15
Manantena aho fa hianatra zavatra iray na roa i Sublime Text. Manana hevitra mahaliana be izy.
Samy mila mianatra ..
raven291286 dia hoy izy:
Nampiasako io ary aiza no tsindrio ny bokotra «Ctrl + E», tsy misy hita, milaza fotsiny aho fa tsy misy ilay fisie raha te hanao iray aho.
Valiny amin'ny cuervo291286
Niezaka ny nametraka azy tao amin'ny Antergos aho (yaourt -S fonosana), saingy indrisy tsy vitako mihitsy ny mamita ny fametrahana amin'ny fomba marina. Mahazo ity lesoka manaraka ity foana aho:
Ny lahasa "Running" curl-dir: node-linux64 "(curl-dir)
Namboarina ny fisie «downloads / node-v0.10.24-linux-x64.tar.gz».
Fandehanana asa "node-clean"
Mampandeha ny lahasa "node-mac"
Mihazakazaka «mamorona-tetikasa» asa
Fananganana rakitra ho an'ny tetikasa
Manomeza, tsy misy diso.
CXX (kendrena) mivoaka / Votsotra / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o
manaova: g ++: Tsy hita ilay programa
libcef_dll_wrapper.target.mkizay212: Ny tsy fahombiazan'ny torolàlana ho an'ny tanjona 'hivoaka / Famotsorana / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o'
manaova: *** [mivoaka / Votsotra / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o] Error 127
==> ERROR: Nisy fianjerana tamin'ny fananganana ().
==> ERROR: Tsy nahavita nanangona fononteny i Makepkg.
==> Atsaharo ny fanangonana bracket? [y / n]
Misy mahalala ve izay mety ho izy na ahoana no fomba hanamboarako azy mba hampiasa ny fononteny?
Raha hitanao fa tsy afaka ianao dia apetraho amin'ny deba.
Izaho avy ao AUR dia mametraka fononteny-bin hatrany
Niasa ny fononteny. Misaotra anao!
Nanandrana tonian-dahatsoratra isan-karazany aho fa amin'ny farany dia miverina amin'i Kate foana aho. Ny fanovana ny CSS an-tserasera, ny fijerena sary na loko dia tena azo ampiharina ary tena mahavonjy fotoana, fa araka ny eritreritrao ve dia ireo antony ampy handehanana amin'i Kate, izay miafara amin'ny fampidirana ireo asa ilaina rehetra hita ao amin'ny tonian-dahatsoratra hafa, mankany amin'ny fononteny? Fantatro fa hahazo ny valiny tsara indrindra aho amin'ny fanandramako izany, fa ny marina dia somary mankaleo aho manandrana an'ity na ity programa ity ary amin'ny farany dia miverina amin'ireo izay nanome valiny tsara tamiko nandritra ny taona maro.
Ny olana hitako amin'ny KATE fotsiny dia ny tsy fananany autocompliment, ny label ary ny sisa 🙁
firefox-user-88 dia hoy izy:
Toa ny autocomplete dia: http://kate-editor.org/about-kate/
Valio amin'ny firefox-user-88
Eny, ho an'ny HTML sy CSS mbola tsy nahita an'io aho.
clow_eriol dia hoy izy:
Ny famenoana autocomplete izay tsy manao izay angatahin'i elav. Izy io ihany no mameno anao raha misy teny iray izay manomboka mitovy ao amin'ny rakitra rehetra.
Mamaly an'i clow_eriol
Ny safidy voalohany tsindrio ny 'Dynamic Preview' dia tsy misy afa-tsy amin'ny Google Chrome…. -> Fanesorana….
Misy mania miaraka amin'i Google Chrome ve? adinon'izy ireo fa Linux io? Netflix, WhatsApp ary ankehitriny fonosana ...
Eny. Ny zava-mitranga dia tsy misy dikany io safidy io raha tsy miasa miaraka amin'ny .html ianao, izay tsara ho an'ny layout, fa rehefa mamorona lohahevitra ho an'ny WordPress ianao, rehefa miasa miaraka amina rakitra .php dia tsy ilaina intsony 😀
blonfu dia hoy izy:
Ao amin'ity kinova farany ity dia misy ny fanohanan'ny mpizahatany marobe amin'ny fijerena mivantana, saingy amin'ny alàlan'ny lalàm-pifandraisana dia tsy mandeha izy io. Ao amin'ny rakitra preferences napetrakao ity "livedev.multibrowser": marina, ampiasako amin'ny firefox ary miasa izy.
Mamaly an'i blonfu
Salama, ary ahoana no anampianao azy, satria ampiako io kaody io ary isaky ny manokatra ny programa aho dia mahazo hadisoana izay: ny rakitra preferences dia tsy manana endrika JSON mety.
heckctor dia hoy izy:
Salama, inona ny lohahevitra ampiasainao? mahafinaritra be 🙂
Mamaly an'i heckctor
Ahoana ny fanamorana ny fifandimbiasana avy amin'ny MS Office mankany LibreOffice